Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo ku dhawaaqay liiska 21-ka xiddig ee Man United oo uu ula safray dalka Holland kulanka Europa League & Paul Pogba oo maqan – Gool FM
(Manchester) 02 Okt 2019. Macallinka Kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku dhawaaqay liiska 21-ka ciyaaryahan ee naadigiisa oo uu ula safrayo dalka Holland, halkaasoo ay habeen dambe ku soo ciyaari doonana kulan ka tirsan Europa League.
Paul Pogba ayaan ka mid hayn xiddigaha Manchester United ee u safray dalka Holland, halkaasoo ay kulan ka tirsan Europa League kula soo ciyaarayaan kooxda AZ Alkmaar, balse waxaa socdaalka Man United ka qeyb galay Marcus Rashford.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya inuu sii wado ciyaaraha Guruubkooda L ee tartankan habeen dambe, laakiin ku guuleystaha koobka Adduunka ee Pogba ayaa ka mid ah xiddigo sare oo ka maqan kulankan kooxda Man United.
Pogba ayaa ciyaaray kulankii todobaadkii la soo dhaafay ee Carabao Cup kaasoo ay man United rigooreyaal kaga adkaatay Rochdale iyo midkii ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League oo ay Isniintii barbaro 1-1 la galeen Arsenal, laakiin dhaawac cagta uu qabo ayaa sabab u noqotay inuusan Man United ula safrin dalka Holland ka hor kulanka habeen dambe.
Anthony Martial, Phil Jones iyo Luke Shaw ayaa sidoo kale ka maqan Manchester United kulanka Europa League si la mid ah Aaron Wan-Bissaka kaasoo quman xanuun ku seegay kulankii Arsenal.
Diogo Dalot iyo Angel Gomes ayaa diyaar ah kulanka habeen dambe ee Europa League, halka 19-sano jirka Brandon Williams isna lagu daray shaxda Man United ee ka qeyb galaya kulankaas.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 21-ka xiddig ee Macallinka Man United, Ole Gunnar Solskjaer ula safray dalka Holland kuwaasoo uu kala qeyb galayo kulanka habeen dambe ee Europa League:-
📝 Ole has confirmed our 21-man squad for tomorrow’s game v AZ Alkmaar, plus an injury update. #MUFC #UEL